पृथ्वी बचाउन प्लाष्टिक त्यागौं
2011-06-11 06:57:57 | अमित घिमिरे
थुप्रै असमानता विभेदको वर्गचरित्र भएको हाम्रो मुलुकमा एउटै कुरामा समानता छ एउटै कुरा विभेदरहीत छ त्यो हो- प्लाष्टिक । करोडौंका गाडी भएका धनवान हुन् मध्यमवर्गका हुन् वा चरचर्ति पैताला फुटेका हँुदा मात्र खान पाउने अति विपन्न वर्गका हुन्; प्लाष्टिकमा भने पहँुच छ ।
गाउँ-शहर तराई-पहाड-हिमाल सबै ठाउँमा एक समान रुपले सहज पाइने थोरै वस्तुहरु मध्ये एकै वस्तु हो- प्लाष्टिक । खानेकुरा लगाउने लत्ताकपडा दैनिक प्रयोगका वस्तुहरु भान्छादेखि चर्पीसम्ममा प्रयोग गरिने प्लाष्टिक उज्वलनशील हुन्छ । यस्ता उज्वलनशील सरसमानका कारण आगो लाग्ने र आगोबाट हुने क्षतिलाई धेरै बढाएको छ ।
ओजन तहलाई क्षयग्रस्त तुल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेको प्लाष्टिक जीव वनस्पति र धर्तीका लागि मन्द विष हो । सरल-सहज उपयोगी प्लाष्टिकले संसारलाई रोगी अपाङ्ग तुल्याई पनि रहेकेा छ । एक अनुसन्धानका अनुसार प्लाष्टिकको विषालु ग्याँससँगको अधिक सम्पर्कले गर्भको बच्चा तुहिन्छ । नतुहिए पनि जन्मने बच्चा अपाङ्ग जन्मन्छ । प्रजनन् अङ्गहरुलाई विस्तारै निस्कृय तुल्याउँछ ।
प्लाष्टिकको समाप्ति सजिलो छैन जति प्रयोग सजिलो छ । समाप्ति सजिलो किन पनि हँुदैन भने यसलाई पुनःप्रयोगमा ल्याईन्छ । यो नष्ट पनि हँुदैन । प्लाष्टिकलाई जलाउँदा विषालु ग्याँस कार्बनडाइअक्साइड कार्बनमोनोअक्साईड डाईअ_िक्सन्स जस्ता ग्याँस उत्सर्जित हुन्छ । यस्ता विषालु ग्याँसले धर्ती आकाश र जीवलाई अत्यन्त दुस्प्रभाव पार्दछ । यही रफ्तार रहने हो भने प्लाष्टिक पृथ्वीका लागि दोस्रो यमराज बन्छ ।
हावाले सजिलै एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म पुर् याउन सक्ने प्लाष्टिकप्रति जनावरहरु लोभिएर खान पुग्छन् फलस्वरुप मर्छन् । मरी नहालेता पनि आजन्म दीर्घरोगी भएर रहन्छन् । प्लाष्टिकमा हुने विस्फेन नामक रसायनले शरीरमा डाइविटिज र कलेजोको एन्जाइमलाई असमान्य तुल्याई मृत्युको सम्मुख पुर् याउँछ ।
तर पनि हामीले यसतर्फ कुनै चासो छैन चिन्ता छैन । वातावरणकै खातिर संसारमा अरबौं-अरब डलर खर्च भईरहेको छ । नेपालमा पनि थुप्रै त्यस्ता सरकारी गैरसरकारी संघ संस्था छन् जो वातावरण पर्यावरणका लािग काम गर्छाै भनिरहेका छन् र पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन । कोठे कार्यक्रम गर्ने भन्दा बढेर केही हुन सकेको अवस्था छैन ।
आजको सजिलो र सुविधामा हामी हाम्रो भोलिलाई स्वाहा गरिरहेका छौं । चिया चर्चामा भेटघाटमा चाडपर्वमा यत्रतत्र हामी राजनीतिका जीवनधाराका विविध पक्षको फजुल चिन्ता र चासो प्रकट गर्छाै तथापि वातावरण तथा पर्यावरणको कुरै उठाउँदैनौं । सत्ताको खिचातानीमा अलमलिएको देशका राजनेता जननेता र नागरिक कसैलाई पनि कुनै फिक्री छैन ।
र अनि हामी एकपटक आफ्नो वरपर हेरौं । यसबाट भएको र हुने क्षतिलाई आत्मसात् गरौं । प्लाष्टिकलाई त्याग्न बजार किनमेलमा जुट आदिको झोला-थैलो प्रयोग गरौं । विशेष गरेर कागजको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिऔं । विभिन्न सरोकारवालाहरुले प्लाष्टिक परहेजका लागि अभियान थालौं । घर-टोल गाउँ-बजार आदिबाट प्लाष्टिकको झोलालाई मात्र विस्थापित गर्न सक्यौं भने पृथ्वी बचाउन हाम्रो भूमिका तिल बराबरको भएपनि पर्वत समान उच्च रहने छ ।
प्रयोगमा आईसकेका कागजका थुङ्गा बनाएर प्लाष्टिक झोलाको विकल्प खोजौं । खरिद गर्न जाँदा घरबाटै झोला लिएर जाने बानी बसालौं । उज्वलनशील प्लाष्टिकको प्रयोग भान्छामा नगरौं । आर्थिक मितव्ययिताका हिसाबले पनि प्लाष्टिकभन्दा कागज सस्तो हुन्छ । कागजको कच्चा पदार्थ उत्पादनले गरिबी न्यूनिकरण तथा रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुने र वातावरण पनि चुस्त दुरुस्त हुनेहँुदा केवल हाम्रो मानिसको प्रयासले पृथ्वीलाई जोगाउन सक्छौं । आफ्ना लागि सन्तती दरसन्ततीका लागि पृथ्वी बचाउन प्लाष्टिक त्यागौं ।
हुन त ठिकै हो . यसको लागि पहिला तेस्को साटो प्रयोग गर्ने आकों समान निकाल्नु पर्यो नि
- Bipin Shrestha : New Baneshwor
यी गुण्डा के गुण्डा ती गुण्डा पो गुण्डा !
पर्यटकीय दृष्टिकोणमा सिन्धुपाल्चोक
मैले देखेको सिन्धुपाल्चोक
हंगामादार अनुगमन : कमजोर कारबाही
विवाहः सुपारी दृष्य परिदृष्य र ऐंठन
नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया र पर्यटन